Ndeipi kukosha kwechiratidzo? Bvunza kambani yakaita saNike uye iwe ungati mamirioni emadhora - asi chokwadi ndechekuti, muna 1971, Nike akabhadhara $ 35 yelogo yavo. Mazuva ano, iyo yekuenda rate yehunyanzvi logo dhizaini inogona kuve chero iri pakati pe $ 150 ne $ 50,000. Isu nguva pfupi yapfuura takashanda nemutengi uyo akashandisa $ 16,000 pane logo dhizaini chete kuti vawane pavakaita Google Image Kutsvaga indasitiri yavo…
Imwe nzvimbo yandisina kuisa mari yekumaka yaive ino saiti. Nepo yangu agency iine logo huru yandinoda, uye isu tichishanda pamwe nevatengi vedu vese pakuratidza kwavo, ini ndanga ndisina bandwidth yekushandira pa Martech Zone muchiso… kusvikira nhasi. Chiratidzo chekare "M" chaive mufananidzo wakashandurwa zvishoma wandakatenga nekuchimbidza mushure mekunge ndachinja duraini. Izvo zvaive pachena, zvaisamiririra chero chinhu, uye